by UErin Collazo Miller
Omnye uNicholas ubeka iNveli yesiRomania
Uthandekayo uJohn ngumqondiso we- Nicholas Sparks -romantic, sappy, sad, and redeeming. Incwadi ibhekiselele kwibali lothando lomphathi wezempi owela ngothando ngaphambi kwe-9/11. Uthandekayo uJohn ngenye yeendaba zeTshakazi ezidume kakhulu, ngokukodwa ukususela ekubeni yenziwa ibhayisikobho ngo-2010 eqala u-Amanda Seyfried noChanning Tatum.
Isishwankathelo sikaJohane othandekayo
Uthandekayo uJohn uqala namhlanje, ngokwexesha lomhla wencwadi, kunye noJohn bebukela i-Savannah kude.
Ucinga malunga nokuba uyamthanda kangakanani kwaye kutheni ulwalamano lwabo lwasuka. Elahlekile kwisitimela somcinge, uJohn emva koko uthabatha umfundi ngexesha kwaye ulandise ibali lothando lwabo.
Yonke incwadi ilandelwa nguYohane, owajoyina umkhosi ukuba ahambe naye kubazali bakhe ohlala ehlaziyekileyo aze aqondise. Ngoxa ekhefu ekhaya eWilmington, eNorth Carolina, udibana no-Savannah. Ngokukhawuleza baya kuthandana, kodwa ixesha likaJohane emveni komkhosi-9/11 lilinganisa ubuhlobo bomtshato.
Kukho, ngelishwa, akuthethi ngakumbi malunga nencwadi ngaphandle kokuba ibali luthando eliqikelelweyo. Uthandekayo uJohn unesicatshulwa esihle. Ukubhaliweyo kokubhaliweyo kuyabhanya kwaye kulula, kodwa abalinganiswa abayikhunjulwa okanye bunzima. Ukongezelela, ibali lothando alunangqiqo.
Oko kuthethwa, abalinganiswa bayathandeka, ukuba akunjalo ngokukhethekileyo, kwaye ulwalamano lukaJohane noyise ludala into ephambili.
Nangona i-Sparks enye yeyokuqala ukubeka i-old boy ubudala idibana nebali lokuthanda intombazana kwihlabathi lanamhlanje, emva kwe-9/11, akayi kucacisa indlela imfazwe ithinta ngayo abalinganiswa. Eyathandekayo uJohn , kunokuba nayiphi na imfazwe iyabahlukana. Le nto imfazwe ethile ayibalulekanga.
Ngokubanzi, uJohn othandekayo ufundela ngokukhawuleza, kulula ukufunda oko akusizibuhlungu kodwa akonwabi kakhulu ukufunda.
Ukuba ufuna ukufundwa kwebala lolwandle, qhubeka uye uliboleke. Kuya kukunika iiyure ezimbalwa zokuphepha, ukuba akukho nto.
Kunconywe kulabo abathanda ama-compy romantic comedies, kunye namaxesha amaninzi, kodwa kungekhona abo bathanda inyama encinane ekufundeni kwabo. Ukuba uthanda iincwadi ezidlulileyo ngo-Sparks, mhlawumbi uya kumnandipha uYohn othandekayo.
Thetha nguLaurie Halse Anderson
'I-Da Vinci Code' nguDan Brown: Ukuhlaziywa kwencwadi
Ukuhlaziywa kweNcwadi yeeNgelosi kunye needemon
"I-Topdog / Underdog" I-Summary Play
UkuHlola kweNcwadi emangalisayo
INdlu yoHlolo lweNcwadi yoBusuku
Ukuhlaziywa kweNcwadi yeGruffalo
Mayelana "Ngaba Ungumama?" PD Eastman
Idayari ye-Wimpy Kid: I-Straw Last
I-Case Strange ka-Origami Yoda
Ukuqonda iziSeko zokuThengisa ukuPrinta
Iiphambili ezi-12 zezona ziDumi zoBonakaliso eziPhambili kunabo bonke ixesha
Yintoni iHygrometer kwaye Isebenza Kanjani?
I-Ittekimasu - Imifanekiso engamaJapan elula
I-Notre Dame GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukuqonda amaChords eDissonant kunye neeCononant
YINYE UKUQALA KWISIKOLO njengomfundi wabadala
I-Biography ka-Edward Durell Stone
I-Arkansas Tech University Admissions
Imigaqo yesiFrentshi ehambelana neMardi Gras
Yintoni Oyenzile Kulo Summer?
I-PGA Tour of Victory Over Leaders
Excel DATEVALUE Umsebenzi
Iikholeji ze-Kaplan MCAT
Isikhokelo sokuchonga iKorale yoMlilo kunye nokuPhatha izibilini zayo
Imfazwe Yehlabathi II: USS Cowpens (CVL-25)